Sawirro:- Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa guddoomiyay shirka horumarinta Dhaqaalaha. – XOGMAAL.COM
Abdiraxmaan Ducaale Bayle Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ayaa hordhigay Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiiradii ka qeybgalay shirka warbixin ku sabsan horumarka Maaliyadeed iyo hiigsiga hanaanka deyn cafinta Soomaaliya isla markaana ay dhawdahay in laga cafiyo deymaha Soomaaliya rajada laga qabo.
By Soomaaliya	 Last updated Oct 29, 2018
Xasan Cali Khayre Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddoomiyay shirka Hormarinta dhaqaalaha Dalka, kaasi oo looga hadlay horumarka maaliyadeed iyo hiigsiga hanaanka cafinta deymaha Soomaaliya lahu leeyahay.
Xafiiska Kheyre ayuu si gaar ah uga dhacay shirkaan waxaana diiradda loogu saaray horumarada maaliyadeed ee dalka, iyadoona ay ka soo qeyb galeen qaar ka mid ah Wasiirada ku lugtaleh arimaha dhaqaalaha xukumadda Soomaaliya sida Wasiirka Maaliyadda ,Qorsheynra , Beeraha iyo Xubno kale oo kamid ahGolaha Xukuumadda.
Daawo: Ku dhawaad 190 rakaab ah Diyaarad ay saaran yihiin ayaa shil gashay